यी हुन् कल्चर एन्ड टुरिजममा उत्कृष्ट ठहरिएका १६ फोटो, तपाईँलाई कुन राम्रो लाग्यो? – MySansar
यी हुन् कल्चर एन्ड टुरिजममा उत्कृष्ट ठहरिएका १६ फोटो, तपाईँलाई कुन राम्रो लाग्यो?
Posted on September 6, 2016 September 6, 2016 by Salokya
पीजे क्लबले आयोजना गरेको नेपाल फोटो प्रतियोगिता २०७३ का उत्कृष्ट फोटोहरुको प्रदर्शनीको आज मंगलबार अन्तिम दिन हो। काठमाडौँको बबरमहलस्थित नेपाल आर्ट काउन्सिलमा फोटो प्रदर्शनी भइरहेको छ। काठमाडौँपछि नेपालका मुख्य सहरहरुमा पनि यो प्रदर्शनी गरिनेछ। प्रदर्शनीमा जान नभ्याउनुभएकाहरुका लागि उत्कृष्ट फोटोहरु माइसंसारमा राख्दै आएको छु। यस पटक हेरौँ ‘कल्चर एन्ड टुरिजम’मा उत्कृष्ट ठहरिएका १६ फोटो। तपाईँलाई कुन फोटो राम्रो लाग्यो, कमेन्टमा लेख्नुस् है त।
भक्तपुरको भूकम्प प्रभावित क्षेत्र खाचामा बाराहीको मुकुन्डो लगाएका नर्तकसँग स्थानीय बासिन्दाहरु। बाराहीलाई भूकम्पसँग सम्बन्धित देवीका रुपमा पूजा गरिन्छ। अमित वनमालाले क्यानन ७०० डीबाट यो फोटो खिचेका हुन्।
पाटन दरबार स्क्वायरमा कात्तिक नाच नाच्दै। फोटोमा देखिएको नृसिंह हो। आभाष कर्माचार्यले यो फोटो खिचेका हुन्।
ललितपुरको सिद्धिपुरमा असार १५ गते धान दिवसका दिन सेल्फी खिच्दै युवतीहरु। अंगद ढकालले यो फोटो निकोन डी ७५० बाट खिचेका हुन्।
बाला चतुर्दशीका दिन ललितपुरको बज्रबाराहीमा दीयो बाल्दै महिलाहरु। दिनेश श्रेष्ठले यो फोटो क्यानन फाइभ डी मार्क टुबाट खिचेका हुन्।
शिवरात्रीको दिन हलेसी महादेवको मन्दिर। विसप ताम्राकारले यो फोटो क्यानन सेभेन डीबाट खिचेका हुन्।
इदको दिन काठमाडौँको मस्जिदमा यो फोटो विक्रम राईले क्यानन फाइभ डीबाट खिचेका हुन्।
भक्तपुरको कुहिरोले ढाकेको यो फोटो विकेश प्रजापतिले क्यानन ६० डीबाट खिचेका हुन्।
अजय जी.ले यो फोटो मार्खु जाने बाटोमा निकोन डी ७००० बाट खिचेका हुन्।
माधवनारायण मेलाका बेला पशुपतिनाथ मन्दिर छेउ वागमती नदी किनारमा स्वस्थानी व्रत बसेकी महिलाहरुको यो फोटो सुनील शर्माले क्यानन ६ डीबाट खिचेका हुन्।
होली मनाउँदै गरेको यो फोटो सम्ब्रन्दा बज्राचार्यले क्यानन ६०० डीबाट खिचेकी हुन्। फोटो प्रतियोगिता जित्ने उनी एक मात्र महिला पनि हुन्।
खोकनामा मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा बेला घुमाइँदै गरेको घुँन्याको यो फोटो रबिक उपाध्यायले निकोन डी ५१०० बाट खिचेका हुन्।
बाला चतुर्दशीका दिन वागमती नदीमा दीयो बग्दै गरेको यो फोटो प्रताप थापाले क्यानन ५ डी मार्क टुबाट खिचेका हुन्।
रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्राका क्रममा भैरवको पूजा गर्दै गरेको यो फोटो मिलन अधिकारीले क्यानन ७ डीबाट खिचेका हुन्।
होलीका दिन वसन्तपुरमा रङ्गसँग खेल्दै गरेको यो फोटो लेलिसले क्यानन ७० डीबाट खिचेका हुन्।
भक्तपुरस्थित नवदुर्गा मन्दिरमा विशेष पूजामा एक नवदुर्गा गण आफ्नो भाइसँगै मुकुन्डोलाई हेर्दै। उक्त दिन सम्पूर्ण नवदुर्गा गणका मुकुन्डोहरु जलाइन्छ साथै उक्त दिनदेखि घण्टाकर्णको दिनसम्म भक्तपुर नगरमा भगवानको बास हुँदैन भन्ने मान्यता पाइन्छ। लक्ष्मण कर्माचार्यले यो फोटो निकोन डी ७००० बाट खिचेका हुन्।
भूकम्पले प्रभावित वसन्तपुर गद्दी बैठक अगाडिबाट गुर्जुको पल्टन जाँदै गरेको यो फोटो दीपेन श्रेष्ठले क्यानन ६०० डीबाट खिचेका हुन्।
2 thoughts on “यी हुन् कल्चर एन्ड टुरिजममा उत्कृष्ट ठहरिएका १६ फोटो, तपाईँलाई कुन राम्रो लाग्यो?”
madhav narayan mela bela pasupati nath nandir ko
I like the following photographs
1. Markhu jane bato- Suspension bridge and its surroundings
2. Balchaturdashi- Lighting
3. Elder brother taking care of his brother while he is watching the mask. A small child still fulfilling his duty of care.